1.Waa maxay Pregabalin? Pregabalin (148553-50-8) waa daawo inta badan lagu iibiyo magaca astaanta u ah 'Lyrica' ee gobollada kala duwan ee adduunka. Waa daawo ka hortaga suuxdinta oo sidoo kale loo yaqaan 'anticonvulsant'. Daawada waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo waxyaabaha maskaxda ku dhaca ee sababa suuxdinta. Dhanka kale, Pregabalin waxay wax yeelaysaa kiimikooyinka maskaxda ee u dirta calaamadaha xanuunka dhammaan dareemayaasha jirka. Daroogada ayaa sidoo kale annaga ...
1. Waa maxay budada Tadalafil? Budada Tadalafil (171596-29-5) waa daawo loo qoro oo lagu heli karo qaabab kala duwan oo afka ah sida kiniin iyo budo. Daawadan waxaa laga heli karaa suuqa iyadoo la adeegsanayo magacyo kaladuwan sida Adcirca iyo Cialis. Sidoo kale, tadalafil ayaa u jira qaabkiisa guud. Si kastaba ha noqotee, lagugula talin maayo inaad isticmaasho budada guud kor u qaadida sababta oo ah waxaa laga yaabaa inay ka maqnaato dhamaan dawadii asalka ahayd ...
Wax kasta oo ku saabsan Trestolone Acetate (MENT) 1.Waa maxay Trestolone Acetate (MENT)? 2. Sidee ayay Trestolone Acetate u shaqaysaa? 3. Isticmaalka Trestolone Acetate (MENT) 4.Trestolone Acetate (MENT) Qiyaasta 5.Trestolone Acetate (MENT) nolosha nuska ah ee 6.Trestolone Acetate (MENT) wareegga 7.Trestolone Acetate (MENT) natiijooyinka 8.Trestolone Acet (MENT) loogu talagalay goynta 9.Trestolone Acetate (MENT) ee bullying 10.Trest ...